झलनाथ, काजी र वामदेव, उफ्
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल मैले प्रशंसा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, तर सर्प पाल्छु भनेर आफ्नै नामको फाउण्डेशनका नाममा ७२ करोड लिनुभएछ, नेता सर्प उद्यमी, उफ्....।
गोरखाबाट चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको छ । अव बर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ । यो कति लोकतान्त्रिक निर्णय हो, उफ्....।
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नागरिकहरुले काम पाएनन् । उद्योगधन्दा चलेका छैनन् । भोकभोकै जनताहरु आत्महत्या पो गर्न थाले । सर्वहारावादीको सरकार छ, नागरिक भोकभोकै आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यो कति हृदयबिदारक समाचार हो, उफ..।
सरकारकै सामु खुलामञ्चमा, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षकै जिल्ला झापामा, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकै निर्वाचनक्षेत्र चितवनको गीतानगरमा भोकाहरुलाई चन्दा उठाएर निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ । यो सरकारले, पार्टीले, नेताले होइन, केही युवाहरुले गरेका हुन् । लोकतन्त्र छ, लोककल्याणकारी सरकार पनि छ, नेताहरु सर्वसम्पन्न पनि छन्, तर यस्तो दृश्य देखेर कसैको मन रुँदैन । उफ्...।
जिउँदाले कोरोना भाइरसको परिक्षण पाउँदैनन्, मरेपछि कोरोना पोजिटिभ देखियो । सरकार आफै प्रवक्तामार्फत दिनहुँ भनिरहेको छ, एकजनाको परीक्षण र उपचारमा एकलाख १३ हजार खर्च भइरहेको छ । यसरी खर्च भएको छ भने ज्यूँदालाई बचाउन खर्च गरौं न, मरेपछि पोजिटिभ देखियो भनेर संख्या र आतंक किन बढाइरहेको ? काम देखाएको हो सरकारले । कस्तो सरकार हो यो, उफ..।
कुनै टोलमा, छिमेकमा कसैलाई कोरोना सरिहाल्यो भने, हल्ला हुन्छ र छिःछिः दूर दूर गरेको देखियो । रोग हो, जसलाई पनि सर्छ । सार्वधानी अपनाउन भन्नुपर्छ, सबैले सहयोग र सहृदयता देखाएर आत्मबल दिनुपर्छ । तव न कोरोना भाइरसलाई जित्न सकिन्छ । त्यसै पनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि आत्तिएका हुन्छन्, त्यसमाथि छिमेकले पनि अछुतजस्तो व्यवहार गरेपछि व्यक्तिको हिम्मत कसरी बढ्छ । आतंकले पीडितलाई ज्यूँदै मारिदिने ? उफ्...।
राजधानीको वानेश्वर, संसद भवन अगाडिको सिभिल अस्पताल, संसद भवन पछाडिको स्वास्थ्यकर्मीको होस्टेल, टोलका सचेत भनिएका नागरिकहरुले स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध नाराबाजी गरे, यहाँ बस्न पाइन्न, कोरोना सर्छ भनेर जुलुसै निकाले, ढुङ्गामूडा गरे । स्वास्थ्यकर्मीमाथि यतिसम्मको दुव्र्यवहार । यसमाथि काठमाडौं, चितवन, विराटनगर, रुपन्देहीदेखि धेरै ठाउँका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र गुण्डागर्दी पनि भयो । योभन्दा जङ्गली काम अरु के हुनसक्छ । के स्वास्थ्यकर्मीको काम बिरामी निको पार्ने होइन ? स्वास्थ्यकर्मी सचेत छैनन् होला, सावधानी अपनाएका छैनन् होला, फेरि तिनीहरुमाथि नै दुव्र्यहार गर्ने हामी कस्ता ? कि कहिले पनि स्वास्थ्यकर्मीकोमा जान्न भन्न सक्नुप¥यो, चाहिदैन भन्नुप¥यो, कि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सह्राहना गरेर उत्साह र उत्प्रेरणा दिनुप¥यो । समाचार छ, संसारमा ७ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाको उपचार गर्दागर्दै मर्नुप¥यो । यो विपतमा बाँच्ने र बचाउने कर्तव्य जो कसैको हो । यसकारण स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला बढाउनु साटो दुव्र्यवहार । उफ्...।
स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरुले बिरामीलाई सही व्यवहार गनुपर्छ । यदाकदा फर्काउने र बिरामीलाई यो त्यो अस्पताल लाँदालाँदै मारिएको घटना पनि छन् । यसकारण सावधानी अपनाऔं, सबैले मानवोचित व्यवहार गरौं, बचौं र सकेसम्म बचाऔं ।
यो विपतको बेलामा हो मानवीय व्यवहार गर्ने र देखाउने ?